आज दिउँसो नेकपा एमालेमा ठूलो बज्रपात हुदैं: ओलीको 'दाल गलेन', नेताकार्यकर्ताहरु बने निराश ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
आज दिउँसो नेकपा एमालेमा ठूलो बज्रपात हुदैं: ओलीको ‘दाल गलेन’, नेताकार्यकर्ताहरु बने निराश !
नेकपा एमालेमाथि आज ठूलो बज्रपात हुने भएको छ । बागमतीमा एमाले सरकार ढल्ने पक्कापक्की छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदै छिन् । तर, अल्पमतमा रहेकाले ५४ दिनमै उनको कार्यकाल सकिने लगभग पक्का छ । उनी २ भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।